C/weli Gaas oo ka hadlay toddobada wiil ee dilka lagu xukumay iyo Nabadoonka lagu xiray Boosaaso – STAR FM SOMALIA
C/weli Maxamed Cali Gaas, Madaxweynaha Maamulka Puntland, ayaa markii ugu horeysay ka hadlay toddobada nin ee dhalinyarada ah, ee bartamihii bishan ay Maxkamadda Ciidamada Puntland dilka ku xukuntay iyo ninka odayga ah ee toddobaadkan lagu xiray Magaalada Boosaaso.
Madaxweynaha Puntland ayaa waxna laga weydiiyay dilalka ka dhacay Magaalada Boosaaso, ayaa marka hore sheegay in amniga guud ee Puntland uu yahay mid degan, isagoo intaa ku daray in hay’adaha ammaanka uu ku ammaanayo in ay gacanta ku soo dhigeen raggii dilalkaasi gaystay, maxkamadina ay xukuntay.
Madaxweynaha, ayaa tilmaamay in hadda la suggaayo racfaan ay xukunka dilka ka qaataan toddobada nin ee dhalinyarada ah, iyadoona uu ku baaqay in la hubiyo dhalinyarada la xukumay, ka hor inta aan dilka lagu fulin.
Madaxweynaha, ayaa ku waramaya inaanan qofna xaq-darro lagu dili doonin, dembi aanu lahayna aan dusha loo saarayn, maadaama sida uu sheegay ay Puntland ku dhisan tahay sharci.
C/weli Maxamed Cali Gaas, Madaxweynaha Puntland, ayaa soo hadalqaaday xariga Sabtidii Magaalada Boosaaso loogu gaystay Nabadoon C/qaadir Axmed Xarago, Afhayeenka Odayaasha Dhaqanka ee Gobolka Bari, ka dib markii uu Afhayeenku sheegay in dhalinyarada si xun loogu jirdilay jeelka Boosaaso.
Madaxweynaha Puntland, ayaa wuxuu sheegay in Nabadoon C/qaadir Axmed Xarago ay u haystaan nin taageero u ah Ururka Al Shabaab.
“Ninka hadda la sheegayo ee Nabadoonka isku sheegay ee arrintaa ka hadlayna, dabcan waxaan u haysanaa Shabaab iyo ciddii la jirto oo taageersan, Shabaab bay noqoneysaa.” Ayuu yiri Madaxweyne C/weli Gaas.
Madaxweyne Gaas, ayaa yiri “Inuu taggo xabsiga oo nimankii dilka lagu xukumayoo dadka laayay uu isla soo sawirro, micnaheeda waxay tahay isna wuu ka tirsan yahay oo ka mid buu ahaa weeye. Cid kaluuna malaha farriin u dirayaa oo isaga uu taageere u yahay.”
Gaas, ayaa intaa raaciyay “Wixii uu sharciga ka qabo cidna loogu aabe yeelo maayo ayaa la marsiin doonnaa. Anagu Nabadoonka ma aanaan raadsan, gurigiisa uguma aanan tagin, isagaa hawshaan faraha la galayoo idaacadaha ka hadlayoo, xabsiga tagayoo, waxaan wanaagsanayn ku kacay oo sameeyay.”
Jubbaland oo diyaar garowgii ugu dambeeyay ugu jirta duulaan ka dhan ah Al-Shabaab